Blog-Tipping: Lendo.org | Martech Zone
ဘလော့ - တင်ရန် - Lendo.org
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 8, 2007 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 23, 2014 Douglas Karr
အခြားဘာသာစကားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြံပြုချက်တောင်းခံမှုအတွက်Andréကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Lendo.org (ဘာသာပြန်ထားသော - စာဖတ်ခြင်းသည်) ဘရာဇီးမှစာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စာပေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စာပေပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေ၊ ဘာသာစကား၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, ငါရေးသားချက်များကိုတကယ်ဖတ်နိုင်ပြီး site ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ အင်ဒရူးသည်အလွန်သနားစရာကောင်းသည့်ဘလော့ဂါတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူရေးသားခဲ့သောစာတွင်သူကပရိသတ်ကိုသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမျှဝေရန်ပြုလုပ်နေသည်။
Lendo.org ကိုတိုးတက်စေရန်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေခြင်းသည်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ သူ၏ဘလော့ဂ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သူအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။ အန်ဒရေ၏အရေးအသားသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည် (ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဘာသာပြန်ချက်တွင်ပင်မြင်နိုင်သည်) နှင့်ရေးသားချက်များတွင်များပြားလှသောပုံရိပ်များရှိသည် - အကြောင်းအရာအတွက်ကောင်းမွန်သောအမြင်ကိုပေးသည်။
ဒီနေရာမှာမင်းရဲ့ Blog သိကောင်းစရာများ -
RSS သင်္ကေတသည်ကလစ် နှိပ်၍ ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုကိုရယူရန်အတွက် universal ဖြစ်သည်။ သင်၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်သင်္ကေတသည်“ RSS ဆိုတာဘာလဲ” ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သို့သော် feed ထည့်သွင်းရန် link သည်အမှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါ (အနည်းဆုံး Firefox Mac ပေါ်တွင်မဟုတ်ပါ) RSS ကိုသင်္ကေတတခုခုနှိပ်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့လိပ်စာလိပ်စာကိုယူလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုမင်းကနှစ်ခုလုံးကိုခွင့်ပြုမှာပါ။ အကယ်လို့သူတို့ကဆောင်းပါးပေါ်က link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ ဆောင်းပါးကိုသူတို့ဖတ်နိုင် ဦး မှာပါ။
“ div cur statement” အစား“ cursor: pointer” ကိုသင်၏ CSS ဖိုင်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။
ငါသည်သင်တို့၏ဖော်ပြချက် div ကိုပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မယ် (
) ခေါင်းစဉ်စတိုင် h2 ရန်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုး div ထက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်စကားလုံးများရှာဖွေခြင်းကိုပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
ဆိုက်ကိုရောက်တုန်းကငါသတိထားမိတာက 'ခြံပြင်အထက်' အကြောင်းအရာနီးပါးမရှိဘူးဆိုတာပါ။ ဆိုလိုတာကငါရှာနေတာကိုရဖို့ငါ scroll လုပ်ရမယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ မင်းရဲ့ပရိသတ်ကိုဒါလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာမသေချာပေမယ့်ငါလိုရှေးရှေးလူတွေကိုအမှားလုပ်မိတယ်။ သင့်ဘလော့ဂ်၏ခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်နှင့်စာမျက်နှာတိုင်းကိုအလျားလိုက် div တစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းရန်ကြိုးစားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ယခု element များနှင့်ယခုပျောက်ဆုံးနေသောစာမျက်နှာအမြင့်များစွာကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိရှိအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသောအမြင့်အတော်များများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိသတင်းအချက်အလက်ကဏ္ with နှင့် layout ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်၊ သို့သော်ထိုတွင်ရှိနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်အမှန်ပင်အံ့သြမိသည်။ သင့်ဘလော့ဂ်၏ခေါင်းကိုစာမျက်နှာ၏ခြေထောက်နှင့်တူအောင်ပုံစံပြုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ စာဖတ်သူကိုထိုအပိုင်းသို့ခုန်ချစေသောသင်၏အခြားစာမျက်နှာခလုတ်များနှင့်အတူ More (mais?) bookmark ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်စာမျက်နှာ၏ခြေထောက်ကိုအာရုံစူးစိုက်စေလိုပေမည်။
အရေးအသားသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သော်လည်းအဆင်အပြင်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိမသေချာပါ။ ဘာသာပြန်ခြင်း၌ပင်သင်စာဖတ်ခြင်းအတွက်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပါသည် ဓာတ်ပုံ (မင်းရဲ့စာဖတ်ခြင်း) စိတ်ကူးသည်။ ငါလည်းစာမျက်နှာထိပ်၏ဓာတ်ပုံအချို့ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။ နောက်ခံရုပ်ပုံတစ်ခုတွင်အနုပညာပါ ၀ င်သည့်သင်၏နောက်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်စာအုပ်တစ်အုပ်၏ရုပ်ပုံများဖြစ်နိုင်သည်။
About (sobre?) စာမျက်နှာသည်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ မင်းဘယ်သူလဲ? ဘာကြောင့်စာဖတ်ရတာအရမ်းစိတ်အားထက်သန်တာလဲ ဘာကြောင့်ဒီ blog ကိုစတင်ခဲ့တာလဲ
Google Translate နဲ့တောင်မှငါAndréရဲ့အရေးအသားစွမ်းရည်ကငါ့ထက်သာတယ်ဆိုတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါကွဲပြားမှုအပေါ်ကြီးစွာသော post ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှဖြစ်စေ၊.
Fantastic အလုပ်, အန်ဒရေ! ဒီအစွန်အဖျားတောင်းခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Tags: ဖေါ်ပြချက်divခေါက်ဘာသာပြန်ဆို googleသတင်းအချက်အလက်တောင်ကြီးမြို့rss အိုင်ကွန်RSS သင်္ကေတurchintracker ဖြစ်သည်
8:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 49
အံ့ tips ဖွယ်ကောင်းသောအကြံပေးချက်များဒေါက်ဂလပ်!
ငါဘလော့ဂ်တိုးတက်စေရန်အလုပ်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေပြီးသင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာကိုဘာသာပြန်ဆိုရာတွင်ပင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသိရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။
8:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 44
8:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 08
10:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 49
- RSS link
- ဖော်ပြချက်အညွှန်း (ယခုကျွန်ုပ်သည်လှပသော h2 :) ရှိသည်။
- ကြီးမားသောအမြင့်ကိုခေါက်။ “ beautify” လုပ်ရန်နှင့်အောက်ခြေ footer နှင့်ဆက်စပ်ရန်အတွက်ထိပ်ဆုံးမှအပြောင်းအလဲများ
-“” အကြောင်း” စာမျက်နှာ Wr ရေးသားခဲ့သည်
-“ ပိုမို” ကိုကွင်းဆက်တစ်ခုအားကျောက်ဆူးအဖြစ်ထားပါ
- စုစုပေါင်းကို 1024 × 768 resolution အထိတိုးမြှင့်ပါ
10:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 11
ဝိုး! André site ကိုလုံးဝစိတ်ကူးကြည့်ရှု! ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤအပြောင်းအလဲများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွင့်ပြုပါ။ သငျသညျအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းဓာတ်လှေကားကိုမြင်စတင်သင့်ပါတယ်။
17:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 15
Damn it! ကျွန်ုပ်သည်ဂူးဂဲလ်နှင့် URL အပြောင်းအလဲအတွက်ကြီးမားသောပြinနာဖြစ်နေသည်။
စာမျက်နှာတော်တော်များများသည်ရလာဒ်များမှဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ = (
17:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 40
အန်ဒရီက URls နဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။ ပို့စ်များ၏ URI ပြောင်းလဲသွားပါကသင်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကိုရေးသားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုအသိပေးပါ။
17:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 48
ကူညီမှု Doug အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သို့သော်လည်းငါသည်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှန်% ရက်စွဲ% /% postname% မှ% postname% သို့သာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 301 redirection ပြုလုပ်ရန် Dean ၏ Permalinkigration plugin ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်ကျွန်ုပ်၏ရာထူးဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ဒီဟာကိုပြင်ဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူးထင်တယ် ရာထူးအသစ်တစ်ခုကိုသာစောင့်ပါ = (
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 9: 09 AM
အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာများကို ထပ်မံ၍ ရည်ညွှန်းခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်မှာလာရောက်လည်ပတ်သူ ၄၀၀% ခန့်တိုးတက်လာသည်။ ဝိုး!
ကျွန်ုပ်၏ SEO အားထုတ်မှုများနှင့်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာပါ။